Imishini Yemishini Yokwenza Isikhwama Esenziwe Phambilini - Abakhiqizi, Abahlinzeki
Uziphu Isikhwama Doypack Isikhwama / Izikhwama Ukupakisha Machine
Imishini Yokugcwalisa Ngokugcwele i-Doypack Pouch / Bag yokufaka izikhwama ezenziwe ngaphambilini. I-Powder, i-granulate, imikhiqizo e-chunky, ama-pastes, kanye neziphuzo okufanele zigcwaliswe futhi zivaliwe.
Umshini we-Doypack Isikhwama samaphakethe we-doypack we-premade othomathikhi ngokugcwele kusuka ekukhetheni isikhwama, ukugcwalisa nokufaka uphawu.Ifanelekele impuphu efana nokuthosa, ubisi oluyimpuphu, ushukela omnandi njll.
GPB8-200 Okuzenzakalelayo Uziphu Isikhwama rotary kwangaphambilini Isikhwama Machine
Umshini wokupakisha onikezwe isikhwama nge-dosing ehlukile (njenge-multihead weigher, i-auger filler, i-liquid filler njll) ingakulungela ukupakisha okuzenzakalelayo kwe-granular, i-powder, i-powder, unamathisele njll. uziphu sikhwama nokunye.
Isikhwama esenziwe ngaphambi kwesikhathi siyiphakethe elikahle lamaphakethe okudla, amaphilisi noma amaphilisi. Ibuye isetshenziselwe ukupakisha okwesibili kokunezelwa kokudla okukodwa.